ငါတို့ဘယ်သူလဲ Shacha TechnoForge Pvt ။ Ltd.
Rajkot ထဲက အခြေခံ. , Shacha Techno forge CNC & VMC တို့တွင်မပြည့်စုံသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အပြင်းအထန်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေသောအတုကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။.
Shri မှစတင်ခဲ့သည်. Devendra C Patel တစ် ဦး ultramod စက်ရုံအတွက် 2014 ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်, အပြည့်အဝတင်ထားသောစမ်းသပ်ခြင်း ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များ, Shacha TechnoForge မကြာခင်မှာပဲဖောက်သည်တွေနဲ့အနီးကပ်သေဆုံးနိုင်တဲ့ formidable ကစားသမားအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် စိုက်ပျိုးရေးကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပိုက် fittings, flanges, ရထားလမ်း, မော်တော်ကားများစသည်တို့သည်မိသားစုပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏0န်ထမ်းများ၌ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များကိုဂုဏ်ယူခြင်းနှင့် ပို. အရေးကြီးသည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်မောင်းနှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်အခြေပြုချဉ်းကပ်မှုကြောင့်ရှုပ်ထွေးသောအလုပ်များကိုအလွယ်တကူကိုင်တွယ်ရန်လူသိများသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုအထောက်အကူပြုခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ထမ်းများအားအလွန်ကောင်းမွန်သောအသက်မွေး0မ်းကျောင်းကြီးထွားမှုအခွင့်အလမ်းများပေးနေသည်။ ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ထမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်.
2025 တွင် MT Output နှင့် 1000 မီလ် output ကိုရရှိရန်နှင့် 2025 တွင်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏နှစ်သက်သောမိတ်ဖက်ဖြစ်လာရန်.
Shacha Technoforge0န်ထမ်းသည်အကောင်းဆုံးကြာရှည်ခံနိုင်မှုနှင့်အလုပ်ခွင်၌အရည်အသွေးရှိသောထုတ်ကုန်များကိုရယူရန်အကောင်းဆုံးသောအခမဲ့ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်များ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများနှင့်ပြည့်စုံသောချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ချောမွေ့သော0န်ဆောင်မှုများကိုသေချာစေသည့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမိတ်ဖက်များနှင့်အတူကျယ်ပြန့်သောချိတ်ဆက်မှုရှိသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်စိုက်ပျိုးရေး, ပိုက်ကွန်တင်း, မီးတောင်များ, မီးရထားလမ်းသန့်စက်ရုံများဖြစ်သောမော်တော်ယာဉ်များမှထွက်ပေါ်လာသောစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှလာသည်.
ကျနော်တို့ကအတုစက်မှုလုပ်ငန်း၏ကျောက်ခိုင်မာသောအတွေ့အကြုံရှိသည်. အလွန်အရေးကြီးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်စွာသိရှိနိုင်ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ in ရိယာတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနာမည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DNA အတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်သစ်ခေတ် plad သည်ကျွမ်းကျင်မှုအရှိဆုံးနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောပညာရှင်အချို့ကအချို့သောသူများသည်နှစ်ကြိမ်လက်ခံရန်နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားရန်အလုပ်များကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သောအတွေ့အကြုံရှိသောပညာရှင်များမှပြုလုပ်သည်.
နောက်ဆုံးစက်ကိရိယာများကဲ့သို့မှန်ကန်သောသွင်းအားစုများ, ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအာမခံထားသောအလှည့်ကျများ, ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များကပုံမှန်အားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်အပင်များသည်ယနေ့ခေတ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသွင်းနိုင်သည့်ကုန်ကျစရိတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်စေသည်.